Tokony hividy UV Sterilizer Wand ve aho? -UVC fahalalana-FETON CORPORATION Co., Ltd.
Fotoana: 2020-06-30 Hits: 526
Theoretically, UV sterilizer wands will disinfect at a distance for as long as you can power them. Mampalahelo fa tsy tsotra ny fampiharana azo ampiharina, ary tokony hieritreritra in-droa ianao alohan'ny hividianana azy.
Miankina amin'ny zavatra telo ny tena fahombiazan'ny wand manameloka UV:
Nifanaraka ny siansa momba ny halavirana takiana eo amin'ny loharanon'ny jiro UVC sy ny faritra voa. Raha ny filazan'izy ireo dia valo metatra ny halavirana azo antoka eo anelanelan'ny loharano maivana UVC sy ny faritra voa.
Ireo zavamiaina bitika isan-karazany dia nafanaina tamin'ny fomba mahomby tamin'ny halaviran'ny valo metatra miala ny loharano UV.
Hafa noho ny halavirana, ny fotoana ialana dia fatra ilaina koa izay tafiditra amin'ny famonoana ireo viriosy sy bakteria.
Mba hamongorana ny tampony dia tokony ho lava be ny fotoana ivoahan'ny jiro UVC. Ny fiovaovan'ny elanelam-potoana dia satria ny mikraoba rehetra, ny viriosy, ny bakteria, ny otrikaretina sns dia samy manana ny habeny sy ny endriny misy fiantraikany amin'ny fandraisan'ny UVC azy ireo, ny fotoana takiana hamonoana ireo karazana tsirairay dia miovaova.
Ary koa, io teboka io dia tokony hotadidina ao an-tsaina fa ity fotoana fampandrenesana ity dia tokony avy amin'ny halaviran'ny valo metatra eo anelanelan'ny loharano hazavana UVC sy ny faritra voa.
Ny ankamaroan'ny siansa dia mampiseho fa ny fahombiazan'ny jiro UV-C dia eo amin'ny sehatra malaso kokoa. Tsy mandeha tsara eo an-joron-trano sy eo anelanelany izy satria io no hazavana hita maso, ary raha tsy afaka miditra ny hazavana dia tsy hamokatra vokany mitovy.
Noho izany ny bakteria ao anatin'ireo hiondrika sy kitrokely ireo dia tsy hisy fiantraikany amin'ny hazavana UV-C. Io dia hametra ny fampiasana ny UV sterilizing tongolo ho fisaka fisaka ihany.
Rehefa manarona faritra ambonimbony kokoa izy dia takiana ny mekanisma manodinkodina mba hamindrana ny tongotrongotra ho 360 degre.
Araka ny valin'ny siansa, ny habetsaky ny jiro UVC takiana amin'ny fanamorana dia manodidina ny 20,000 XNUMX joule isaky ny metatra toradroa, ary saika tsy azo atao izany amin'ny fitaovana kely tanana.
· Tsy misy torolàlana manokana:
Ny mpanjifa mahazatra dia tsy manana fampahalalana na fahaizana manokana hampiasa ilay fitaovana UVC amin'ny fomba mahomby sy azo antoka.
Ny faharetana takiana marina amin'ny fanamasinana dia miova arakaraka ny karazany ny loharano maivana sy ny virus. Ny virus rehetra dia vita amin'ny fomba hafa. Ny sasany mora tratran'ny taratra ultraviolet, ny sasany kosa henjana kokoa.
Ary koa, ny vokany amin'ny zavamiaina bitika samy hafa dia samy hafa. Ny jiro UVC dia mandaitra indrindra amin'ny bakteria raha ny virus kosa manohitra azy ireo mandritra ny fotoana maharitra.
Ny olona dia tokony hitandrina ny amin'ny famaritana, ny fanambarana ary ny fanekena ho an'ny UV mandany sterilizing amidy eny an-tsena.
Raha ny tena izy dia mitaky olona mihazona azy ny tongolo mangatsiaka UV.
Raha mijery UV tsy mandehandeha kely ianao dia tsy misy na dia iray aza manana fitaovana miaro. Raha afaka manimba ilay virus ilay fitaovana, dia mety hanimba anao koa izy io.
Ny hazavan'ny UVC dia fantatra fa mampidi-doza amin'ny vatan'olombelona. Tahaka ny fahazavan'ny UV-C afaka mamotika ny sela sy ny fonon'ny bakteria sy ny viriosy, dia fantatra ihany koa fa mahafaty ary mety hiteraka homamiadana amin'ny olona izany.
Izy io dia ny karazana hazavan'ny UV izay miteraka sunburn. Mandrahona ny fihanaky ny hoditra sy ny mason'olombelona.
Farafaharatsiny mba manarona ny masonao sy ny sandrinao mandritra ny fiasan'ny jiro UVC hametra ny fipoahana.
3. Fitandremana alohan'ny hividianana fitaovana UVC
· Fahombiazan'ny sterilization:
Tsy ny karazana fitaovana UVC rehetra no mandaitra ary mamokatra vokatra, raha ny momba ny sterilization UVC.
Mandritra ny fividianana fitaovana UVC ho an'ny fanamorana, ny olona dia tokony hihazona ny fahombiazan'ny vokatra. Amin'ny tranga famonoana otrikaretina, ny fahombiazana dia faritana ho isan'ireo mikraoba sy zavamiaina bitika mampidi-doza novonoina tamin'ny ora faharetana.
Tsy misy isalasalana fa ny fitaovana famonoana otrikaretina UVC toy ny UV sterilizing wand dia ampiasaina hanimbana viriosy sy bakteria, na eo aza izany dia be ny fotoana hamonoana virus.
Nambaran'ny manam-pahaizana fa mety hamotika viriosy ny fitaovana UVC, saingy ahiana ny filaminan'ny sandoka.
Raha ny filazan'ny mpikaroka, fitaovana UVC tanan-tanana izay amidy an-tserasera miaraka amin'ny fanambarana fa afaka mamono otrikaina sy fitafiana izy io dia tsy azo atokisana sy mampidi-doza tanteraka raha toa ka diso lalana izy ireo.
Mba hisorohana ny fipoahana dia ahenao ny fidirana amin'ireo toerana ampiasain'ny fitaovana UVC na ferana ny fiparitahan'ny taratra UVC. Asehoy koa ireo famantarana fampitandremana eo am-baravaran'ny laboratoara.
· Ara-dalàna ny vokatra:
Nilaza ny mpahay siansa fa raha tsy afaka manome porofo ara-tsiansa ny mpamono olona amin'ny famonoana zavamiaina bitika ny vokatr'izy ireo dia aza mividy ny vokatr'izy ireo.
Ny sasany amin'ireo vokatra dia tsy manara-penitra ary tsy nahavita nandany ny fenitra napetraky ny tompon'andraikitra. Noho izany, ireo fitaovana dia hanome fahatsapana fandriam-pahalemana diso ho an'ireo mpampiasa.
Ny tsena dia manome fitaovana marobe izay mora vidy ary tsy mahavokatra sy voamarina izany. Ny olona dia mila mahita ireo fitaovana manana kalitao, izay misy porofo amin'ny famonoana otrikaretina amin'ny fitaovana fitsaboana ao an-trano, na raha manana tantaram-pivarotana sterilization izy, toy ny ampiasaina hanimbana santionan'ny ADN any amin'ireo laboratoara.
Raha fintinina, na dia miasa aza ny tekila mandoko UV, ny fatiantoka atiny dia lehibe kokoa noho ny fampiasana azy: ny hazavana UV dia mety amin'ny sehatra fisaka ihany, ary tsy fantatrao hoe mandra-pahoviana no hamonoana ny otrikaretina mba hamonoana viriosy sy bakteria ary mety hifarana mandratra tena.
Taloha: Miteraka kansera ve ny titanium dioksida (TiO2)?
Next: How to choose a high-quality UV LED lamp?